Silos - Delta Engineering Belzika
Silo malefaka - antsasaky ny haavony - fivoahana ambony
Ny silos dia natao hitahiry vokatra amin'ny fomba milamina.
Ity habaka ity dia manana haavon-tsavony antsasaky ny haavon'ny paola ary 1.2 m³.
Notsongaina ambany: fikaonan-dàlana
Silo malefaka - antsasaky ny haavony - fivoahan'ny fototra
Ity haavo ity dia manana halavan'ny paleta antsasaky ny 1226 x 1266 x 1355 mm (49 ″ x 50 ″ x 54 ″) ary avoaka avy eo amin'ny fotony mankany amin'ny toby famoahana DSS050.
Silo malefaka - haavony feno - fivoahan'ny fototra
Ity habaka ity dia manana haavon-tsavony antsasaky ny haavon'ny paola ary 2.5 m³.
Afovoany ho an'ny silo mora
Ity sehatra afovoany ho an'ny silos mora ampiasaina ity dia manome antoka ny mpandraharaha mametraka ny silo amin'ny toerana marina amin'ny famokarana, amin'ny alàlan'ny fametrahana azy eo anelanelan'ny zoro 2 fotsiny.
Tobim-pivarotana feno tavoahangy misy safidy mangatsiaka ho an'ny sela mora ampiasaina
Ity fantsom-bidy tsy manam-paharoa / fihenam-bidy ho an'ny silos mora ampiasaina dia misoroka ny fanodinana tavoahangy mafana, amin'ny alàlan'ny rivotra mitsoka amin'ny alàlan'ny silo.
Notsongaina ambany: hihena
Biraon'ny famoahana tavoahangy feno rano ho an'ny silo mora
Ity tobin-tsolika ity dia mamoaka silô azo ovaina (miaraka amina fivoahana ifotony - DFS150) ao anaty fitoeram-bokatra tavoahangy uncrambler. Fandidiana mandeha ho azy tanteraka. Hita amin'ny toeran'ny silo 1 & 2.